ဗာဒံသီးဘီးစေ့ကိတ်မုန့် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
macaroni များအတွက် velveeta ဒိန်ခဲအရည်ပျော်ဖို့ဘယ်လို
ငါဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့် artichoke သို့ကျဆင်းလာဘယ်မှာဝယ်နိုင်ပါ
Hamilton ကကမ်းခြေနှေးကွေး cooker အပူချိန် settings ကို
ဒါ ဗာဒံသီးဘီးစေ့ကိတ်မုန့် ရိုးရှင်းသော်လည်းရဲရင့်သောအရသာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အချိုပွဲစားပွဲတိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လွယ်ကူသောလွယ်ကူသောစာရွက်ကိတ်မုန့်။
crock အိုးထဲမှာ swiss ကင်စာရွက်
ငါကရံဖန်ရံခါသုပ်၌သူတို့ကိုပျော်မွေ့ကြဘူးပေမယ့်ငါတကယ်သရေစာအဖြစ်ဗာဒံသီးကိုရွေးချယ်ဖို့တ ဦး တည်းဖြစ်ဖူးဘူး။ ဗာဒံသီးကိုငါနှစ်သက်တာကမုန့်ဖုတ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဗာဒံသီးကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ ငါကကိတ်မုန့်နှင့်ကွတ်ကီးများထည့်သွင်းသည့်ပျူငှါနွေးထွေးသောခိုင်မာတဲ့အရသာချစ်ကြတယ်, ငါတို့ရင်ဆိုင်ရကုန်အံ့, ငါတို့ရှိသမျှသည်မဟုတ်ဘဲဗာဒံထောပတ်ထက်တစ်ဗာဒံမယားကစားချင်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်လကငါဒီအရသာ shared ဖရုံသီး Amaretto ဒိန်ခဲဘား သင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူ, ထိုစာရွက်ထဲမှာ, ဗာဒံအချိုပွဲ၏အဓိကအရသာ, ရွှေဖရုံသီးချဲ့ထွင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ဤကိတ်မုန့်တွင်ဗာဒံသီးသည်ကြယ်ဖြစ်သည်! ထိုသို့အချို့သောဘိန်းမျိုးစေ့များနှင့်အရသာ vanilla ကြာပွတ်မုန့်နှင်းခဲနှင့်အတူတစ် ဦး အားကောင်းတဲ့အကူအညီရတဲ့ပဲ!
ငါကိုယ်တိုင်ဒီ Almond Poppy Seed Cake ဟာအားလပ်ရက်အချိုပွဲစားပွဲတစ်ခုအတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖြည့်စွက်ချက်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာရာသီ၏ရွှေဖရုံသီးနှင့် peppermint တပ်ခံစားကြသည်မဟုတ်သောသူတို့အဘို့ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသော option ကိုထပ်ပြောသည်။
ငါအစဉ်အမြဲငါဗာဒံအရသာအကြောင်းကိုချစ်သောသူတ ဦး တည်းအရာကချယ်ရီသီး၏အနှစ်သာရရှိပြီးအခွံမာသီးနှင့်အသီးရောနှောစင်ကြယ်သောနှစ်သိမ့်သည်။ သို့သော်လည်းဘိန်းမျိုးစေ့များသည်အလားတူအရသာရှိကြောင်းသင်သိပါသလား။
ဘိန်းလုံးတစ်ခုလုံးကျန်းမာသွားသောအခါ၎င်းသည်အမှန်တကယ်အာဟာရအရသာရှိသည်။ Kinda အရူး, လက်ျာ? အထူးသဖြင့်မုန့်ဖုတ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ဗာဒံသီးနှင့်ဘိန်းစေ့တို့ကိုတစ်သီးတခြားပြုလုပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အနီရောင်ကျောက်ပုစွန် cheddar ဘီစကွတ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ယူရမည်နည်း
ဤ Almond Poppy Seed Cake သည်ချိုမြိန်ပြီးသိပ်သည်းသည်။ ရိုးရာ fluffy ကိတ်မုန့်နှင့်ပေါင်မုန့်စပ်ကြားနီးပါးရှိသည်။ နှင်းခဲသည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးအစွမ်းထက်သောဗာဒံသီးတွင် vanilla အရသာပါဝင်သည်။ ဒါဟာနည်းလမ်းတိုင်းအတွက်ပျူငှါနွေးထွေးသောငါအရမ်းအရသာ finish ကိုများအတွက်သစ်ကြံပိုးသကြားတစ်နည်းနည်းနှင့်အတူကချွတ် topping အကြံပြု!
ပြင်ဆင်ချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၄၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ဆယ် ချပ် စာရေးသူရေဗက္ကာအိပ်ချ်ဤသည် almond Poppyseed စာရွက်ကိတ်မုန့်ကိုရိုးရိုးလေး၊ ရဲရင့်သောအရသာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အချိုပွဲစားပွဲတိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လွယ်ကူသောလွယ်ကူသောစာရွက်ကိတ်မုန့်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ သတျတော အဖြူကိတ်မုန့်ရောနှော 15,25 အောင်စ
▢၁ ခွက် All- ရည်ရွယ်ချက်မုန့်ညက်
▢၁ ခွက် သကြားဓာတ်
▢နှစ် ဇွန်း ဘိန်းစေ့များ
▢1 ⅓ ခွက် နို့လုံး
▢နှစ် ဇွန်း ဟင်းရွက်ဆီ
▢၁ ဇွန်း ဗာဒံသီး
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သန့်စင်သော vanilla ထုတ်ယူ
▢¾ ခွက် ဒိန်ချဥ်
▢၄ ကြီးမားသောကြက်ဥလူဖြူ အခန်းအပူချိန်
▢နှစ် ခွက် ခရင်မ်လေး
▢½ ခွက် confectioners '' သကြား
▢¼ ခွက် လက်ငင်း vanilla pudding အမှုန့်
၉ လက်မ ၁၃ လက်မအရွယ်ဒယ်အိုးနှင့်ချက်ပြုတ်သည့်အမှုန်ရေမွှား (၎င်းသည်မကပ်သောဒယ်အိုးဖြစ်သည့်တိုင်) ဖြန်းသည်။
သကြားလုံးနှင့်အတူတပ်ထားသောရောနှောထားသောပန်းကန်လုံးသို့မဟုတ်မတ်တပ်ရပ်သည့်အရောအနှောတွင်ကိတ်မုန့်၊ မုန့်ညက်၊ သကြား၊ ဘိန်းနှင့်ဆားတို့ကိုအတူတကွရောမွှေပါ။ နို့၊ ရေနံ၊ ထုတ်ယူမှု၊ ချဉ်သောမုန့်နှင့်ကြက်ဥအဖြူများကိုထည့်ပြီးနှစ်မိနစ်ခန့်ရိုက်ပုတ်ပါ။
အလယ်ဗဟိုတွင်ဓားသို့မဟုတ်သွားဖုတ်ထည့်လိုက်သောအခါကိတ်မုန့်သည်သန့်ရှင်းလာသည်အထိ ၂၅ မှ ၂၅ မိနစ်အထိဖုတ်ပါ။ နှင်းမကျမှီပန်ကာထဲအအေးခံရန်ခွင့်ပြုပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီးသောအရာများကိုကြီးမားသောပန်းကန်လုံးတွင်သုတ်ပါ။ Stand mixer သည်ပိုမိုနှေးကွေးသောနှင်းခဲကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သို့သော်လက်ဖြင့်ရောနှောခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောနှင်းခဲများသည်လည်းကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင့်အားကိတ်မုန့်ထိပ်ကိုလုံလောက်စွာပေးသင့်သည်။ အလင်းနှင့် fluffy သည်အထိ2မှ3မိနစ်နှင်တံ။
ကြက်ဥကြီး (၃) လုံးကိုဥဖြူ (၄) လုံးအစားထိုးနိုင်သည်။
သော့ချက်စာလုံးဗာဒံသီးဘိန်းစေ့ကိတ်မုန့် သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ပိုများသောစာရွက်ကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုလိုချင်ပါသလား ဒါတွေကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
Kahlua ချောကလက် Poke ကိတ်မုန့်
အဟောင်း Apple ကိတ်မုန့်